Haamaha Ganacsatadan Waxay Ku Heleen Sharci Darro Si Kastoo Loogaqaadaa A Sharci Ga Waa La Waafajin Karaa.
(Hadhwanaagnews) Thursday, September 13, 2018 06:39:54
xafiisyadii lacagta idiinka salimay. Haddaad miiskaa suluxa Xukuumadda cusub kula heshiin weyda an waxay noqonaysaa
Maantaa timi iyo lasoo noqoshadii Hamaha iyo Xukuumadda cusub. Marka la is dejiyo ee miiska wada fadhiistaan waxa Xukuumadda idiinka dhexeeyaa waa xisaabtan hufan oo sharciga waafaqsan. Xukuumadda iyo shacabku waxay doonayaan inay idin soo hordhigaan wixii faaiido aa ka soo xarsysateen hantidaa sida qaldan la idiinku wareejiyey idinkuna waxaa miiska soo
saaraysaan waxan aa leedihiin waanu ku dayac tirray iyo waanu ku kordhinay haamaha oo burhaantoodii iyo caddayntoodii wata, xafiisyadii lacagta idiinka salimay. Haddaad miiskaa suluxa Xukuumadda cusub kula heshiin weyda an waxay noqonaysaa in kiiska Haamaha idinkiyo Xukuumaddu Maxkamadaha isla gashaan oo wax walba sharciga loo eego tan iyo maalinta a heshiis een Xukuumaddii hore iyo sidaa wax u kala iibsateen caddaymahoodii. Sideedaba Xukuumaddu maaha hebel iyo hebel maaha ee waa SYSTEM DAWLADEED OO HABAB LA RAACO OO QORAN LEH, markastoo dib loo eego waa la xawqiijin karaa sida arin kastaa u dhacay. Dabacan haddii Ganacsatada iyo Xukuumaddu maxkamadaa isla gala an, maxkamadda sidii wax loo kala iibsatay iyo habkii la raacay iyo sidii wax loo kala qaatay iyo goobtan lagu kala qaatay ina haasoo dhan Bay sharciga iyo Distoorka waafajinaysaa dabadeed Xukun Bay ridaysaa wixii sharciga baa marsanna dembi baa ka ratibmaya.